कृष्ण सेनसँगकाे ती अविस्मरणीय क्षणहरु - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
- नेत्रविक्रम चन्द विप्लव
१३ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०१:१८ May 29, 2018 Nonstop Khabar
स्मरण अर्थात् बितेको कुराको याद गर्नु या सम्झना गर्नु यत्ति हो शब्द स्मरणको अर्थ तर होइन, स्मरणको गहिराइमा पुगेर छाम्यो भने स्मरणको छायाँमा उत्कण्ठा र प्रेरणा, विष्मय र उल्लास, पीडा र गौरव, भावना र विचार छिपेको ठान्छु । कति अजीव छ हैन त स्मरणको परिधि ! हो मलाई कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को स्मरण गर्दा यस्तै अनुभूति हुन्छ ।
धेरै नबुझेर पनि भुलि–नसक्नुको एउटा दिन र दिनको पनि एक साँझ, जसले मेरो आजको जीवनमा पुग्न मजबुत जग हालिदिने काम ग¥यो, आँखाको नानीमा मात्र होइन, नसा–नसामा बगेर फालि–नसक्नुको भार लगायो, त्यसको खुब याद गर्छु र झन्पछि झन् मूल्यवान ठान्छु । त्यसदिनको साँझ, भाषण र गीत, नेता र गायक, नयाँ समाजको परिकल्पना, नितान्त नयाँ जो मेरो दिमागमा पहिले कहिल्यै थिएन तर कहिल्यै नबिर्सनेगरी छाप छोड्यो, यससँग कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ र तिलक वैरागीको स्मृति जोडिएको छ ।
गते कति हो ठ्याक्कै सम्झना छैन तर २०३६ सालभरि राम्रै थाहा छ । रोल्पा, लिवाङको टुँडीखेलमा एउटा चश्मा लगाएको नौजवानले पञ्चायती व्यवस्थाको धज्जी उडाएर गरिब दुःखीको व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएर भाषण गरे । अर्को युवकले गीत गाउँ “गरिबको भन्नु के हुन्छ र आफ्नो बरिलै, यी दुइटा पाखुरा हुन् सोध न साइँलालाई ।” अर्को दिन दिउँसो माध्यामिक विद्यालयका पाका विद्यार्थीहरू चउरमा घेरा मारेर बसे र हिजोको कार्यक्रमको छलफल गर्न थाले । छलफलको हक पाई नसकेको भए पनि श्रोताको अवसरबाट मैले बुझेँ कि चश्मा लगाएर भाषण गर्नेको नाम कृष्ण सेन र गीत गाउनेको नाम तिलक बैरागी रहेछ । ती विद्यार्थीहरूको व्याख्याअनुसार उनीहरू दाङ र काठमाडौंतिर कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी हुन् र कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रचार र सङ्गठन निर्माण गर्न यता आएका हुन् । घेराभित्रबाट एउटाले प्रशंसा ग¥यो, “त्यो चश्मेले त पञ्चेहरूको सातै खाइदियो ।” अर्कोले थप्यो कि “कम्युनिस्ट व्यवस्थामा गरिब धनी कोही हुँदैनन् सबै बराबर ।” गीत त झन् मुख मुखमै झुन्डिहाल्यो, “सोध न साइँलालाई … ।”
पहिलो दिनको कार्यक्रम दोस्रो दिनको टिप्पणीले कम्युनिस्ट व्यवस्था, गरिब धनी सबै बराबर र कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ प्रति मेरो किशोर मनोभावनामा मेट्नै नसकिने लगाव भरिदियो, जो केवल भावात्मक परिमाणले छल्किएको थियो । यो लगावको समीक्षाले गर्दा म सोच्दछु कि मान्छेहरूको एकोहोरो र मिच्छेटलाग्दो जीवनक्रियामा नितान्त नयाँ र आकर्षक परिकल्पनाको समाजले सायद यसरी नै पुरानोबाट नयाँमा हुत्याउँछ होला ।
गिरफ्तारीको विष्मयकारी खबर
“कृष्ण सेन गिरफ्तार पर्नुभयो, प्रहरीहरूले समातेर लगे ।” एउटा पाको विद्यार्थीले छात्रवासको चउरमा अरू विद्यार्थीहरूलाई सुनायो । सबै झुम्मिए, उसको विष्मयकारी खबरप्रति गोल भएर । यो अनपेक्षित खबरले मलाई किनाराबाट झटारेर झुम्मिएकाहरू माझमा लग्यो । “अब उहाँलाई के गर्छ ?” अरूका कुरै नसुनी तीव्र जिज्ञासाका साथ प्रश्न गरेँ । एउटाले विस्तारै बोल्यो, “प्रहरीको के विश्वास, मार्न पनि सक्छ ।” अर्कोले थप्यो, “नमारे पनि जेलमा सडाउने पक्का छ ।” गिरफ्तार, मार्न सक्छन्, जेलमा सडाउने कुराले मेरो किशोर मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुगायो । अरूले सोचेभन्दा औडाहा छुट्यो मेरो छातीभित्र र झुण्डबाट बाहिरिएँ किनकि मभित्र सेनजीलाई एकपटक नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने उत्कण्ठा थियो । त्यो इच्छामै घात लाग्यो, उता जीवनको अनिश्चय रह्यो । मैले मन–मनमा मार्नेभन्दा जेल हाले हुन्थ्यो भन्ने काल्पनिक कामना गरेँ । संजोग भनौँ, केही दिनपछि सुनियो कि उहाँलाई दाङ तुलसीपुरको जेलमा हालिएछ । चर्को पीडामा थोरै राहत जस्तो महसुस भयो, मार्नुभन्दा जेल ठीक । यो घटनाक्रम २०३९ सालको हो ।
रिहाइको उल्लासमय क्षण
“कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ छुट्नुभयो । तपाईंले थाहा पाउनुभयो ?” कृष्णबहादुर महरा सरले एक्कासी सुनाउनुभयो । विष्मयको सट्टा उल्लासको यो आकस्मिक खबरले पनि शरीरभरि विचित्रको तरङ्ग पैदा गरायो । स्वभावतः खबरबाट हामीभन्दा बढी खुसी महरा सर देखिनुहुन्थ्यो । हामी धेरै उमङ्गित भयौँ मात्र । यसो त यो समय मेरा लागि पनि धेरै अन्तरमा थियो । म बाल र किशोर जीवनबाट युवामा प्रवेश गरेको थिएँ र श्रोताबाट सङ्गठकको जिम्मामा पुगिसकेको थिएँ । म, सोनाम, अनन्त, पासाङ विद्यार्थीका स–साना नेता भइसकेका थियौँ । अखिल (क्रान्तिकारी) को अध्यक्षमा थिएँ म ।
समयको दूरी खास समयमा हुने क्रमभङ्गले बोध गराउने जस्तो लाग्छ । हामीले सेनजीको जेल जीवन गन्यौँ, ६ वर्ष बितेछ । यसो त गिरफ्तारीपछि हरेक साल १ वर्ष थपेर “यति वर्षदेखि बन्दी बनाइएका कृष्ण सेनलाई – रिहा गर” भन्ने नारा वालिङ गरिरहन्थ्यौँ । मनोभावना भनिहालौँ, उहाँलाई हाम्रै वालिङ र सङ्घर्षले छुटाए जस्तो गौरव अनुभूति भयो । भित्र–भित्र हिसाब गरेँ, अब ६ वर्ष पहिलेदेखिको उत्कण्ठा पूरा होला ।
राष्ट्रिय भेलाद्वारा अभिनन्दन
“कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई सबैले उठेर अभिनन्दन गरौँ । उहाँ ६ वर्षको कठोर जेल जीवनदेखि रिहा हुनुभएको छ ।” गैंडाकोटदेखि माथि मन्दिर भएको डाँडा मौलाकालिका मन्दिर परिसरमा यदु गौतमले उद्घोषण गरे । देशभरिका विद्यार्थी साथीहरू कुतूहलता र उमङ्गका साथ उहाँतर्फ केन्द्रित भए । हुलको बीचबाट एउटा मध्यम कदको मान्छे उठेर मञ्चतर्फ लाग्यो । कालो कपाल र चश्माले सजिलै अनुमान गरियो कि कृष्ण सेन उहाँ नै हो । पहिलो देखाइ प्रत्यक्ष र निकट नभएकोले होला, दिमागमा अलि फरक चित्र थियो । प्रत्यक्षमा अलिक फरक लाग्यो, केहीमा बढी केहीमा कम । उहाँले सरल र शिष्ट भाषामा अभिनन्दन लिनुभयो र थोरै बोल्नुभयो । बोलाई माझिएको र दृढ खालको रह्यो । छोटोमा जेलभित्रको अनुभूति पनि सुनाउनुभयो । “हामी देश र जनताको निम्ति जीवन दिन पनि तयार थियौँ ।” अरू धेरै याद छैन, यति भने ताजै छ । प्रत्यक्ष परिचय र छलफलमा उहाँको अटल निष्ठा र दृढ इच्छाको गहिरो प्रभाव प¥यो ममा । जो सुनेभन्दा फरक थियो ।
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई केन्द्रीय समितिको संयोजक प्रस्तावित गर्छु, नवौँ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष रमण श्रेष्ठले घोषणा गर्नुभयो । सिङ्गो हलले जोडको तालीद्वारा स्वीकृत ग¥यो । उहाँ दसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिको संयोजकमा छानिनुभयो । हामी सबै प्रतिनिधिहरूलाई एउटा अनुभवी, तानाशाहको परीक्षामा उत्तीर्ण योद्धा र योग्य नेता पाएको महसुस भयो । यो नेतृत्वको अगुवाईमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बन्यो । भेलाको अन्त्यसम्म पुग्दा सेन कमरेडबाट कल्पना गरेभन्दा भिन्न अथक मिहिनेत, दृढ समर्पण, अटल निष्ठाको नौलो प्रेरणा प्राप्त गरेँ, जो सधैँ–सधैँभरि अविष्मरणीय छ । यो २०४४ साल साउनको कुरा हो ।
अध्ययनका लागि दिएको प्रेरणा
“धन्यवाद तर अध्ययनमा पनि ध्यान दिनुहोला ।” अग्लो घन्टाघरको फेद, जहाँ हाम्रो सङ्गठनको सम्पर्कस्थल थियो, मा बसेको बेला म हिरासतबाट छुटेपछि सेन दाइले ममतापूर्वक भन्नुभयो, मैले हाँसेर हुन्छ मात्र भनेँ । मतलब २०४५ सालको चैतमा हो, हामीले असमान सन्धि जलाउने र गिरफ्तारी दिने निर्णय सङ्गठनले ग¥यो । हेमन्तप्रकाश ओली कमरेडलाई असनमा र मलाई रत्नपार्कमा प¥यो । ओलीजीले साथीहरू भनेर के सुरु गर्नुभएको थियो, पञ्चायतका प्रहरीहरूले कटबाँस बजारिहाले । उहाँलाई समातेर कुट्दै घोच्दै असनबिटमा कोचे । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “भारतीय विस्तारवाद – मूर्दावाद, अया … अया … मूर्दावाद, अया … अया … ।” मैले ठानेँ, अब मेरो पालो । नभन्दै मैले पनि रत्नपार्कमा सन्धि जलाएर भाषण गर्न थालेको मात्र के थिएँ, प्रहरीहरूले झम्टिहाले । म चाहेको भए भाग्न सक्थेँ, त्यो कुरा सेन दाइले देख्नुभएको रहेछ । हिरासतबाट निस्केपछि सोध्नुभयो कि “तपाईं किन भाग्नुभएन ?” मैले जवाफ दिएँ, “सङ्गठनले गिरफ्तारी दिने निर्णय गरेको थियो ।” त्यसपछि हो, हाँसेर “धन्यवाद” र “पढ्नुपर्छ” भनेको ! यो वाक्यले मलाई चस्स छोयो । स्कुल पढ्दा महरा सरले र सङ्गठनमा सेनजीले पढ्नुपर्छ भनेको उस्तै लाग्यो । यतिखेर म काठमाडौंको सचिव थिएँ ।
सेन दाइसँगका तीन छलफल
सेन दाइसँग सामान्य छलफल धेरै भए पनि सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक विषयमा केन्द्रित भएर तीनपटक विस्तृत र गहन खालको छलफल भएको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनताका कीर्तिपुरमा, दुईलाइन सङ्घर्षको बेला २०५० सालतिर कुलेश्वरमा र जनयुद्धको अन्तिम तयारी चलिरहँदा २०५२ सालमा । तीनपटककै छलफल फरक–फरक र नयाँ विषयवस्तुमा केन्द्रित थिए । २०४६ सालको आन्दोलनमा हामी युवाहरूलाई पार्टीले गरेको ढिलाढालापन मन परेको थिएन । जुुलुस गर्न र हड्तालको घोषणा गर्न पनि किन यतिविघ्न लिङरिङ गर्नुप¥यो ? हाम्रो आवेगात्मक प्रस्तुति हुन्थ्यो । पछि मात्र बुझियो कि संयुक्त आन्दोलन बनाउनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाझ बहस चलिरहेको रहेछ । हाम्रो असन्तुष्टि देखेर मलाई कोठामा लानुभयो । आधा घन्टा जति पार्टीका जटिलता र आन्दोलनको सोचबारे राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जति सहज आन्दोलनको चाहना राख्छौँ, पार्टीलाई मिलाएर लान व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छन्, सबैको एकमत गर्ने कुरा आन्दोलनको प्रतिकूलताबारे बोध गराउने कुरा हो । अलि बुझ्नुपर्दछ चन्द भाइ । फेरि पार्टी आन्दोलनको सोचमा प्रस्टै छ । अब छिट्टै घोषणा हुँदैछ, आत्तिनुपर्दैन ।” उहाँको तर्कप्रति म सहमत भएँ । नभन्दै केही दिनपछि अर्थात् चैत ५ गतेबाट संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिले आन्दोलन सुरु ग¥यो ।
दुईलाइन सङ्घर्षमा लामाजीहरूले सङ्गठनका सबै मान्यताहरू तोड्नुभयो । छर्लङ्ग देख्यो दुनियाँले कि एकताकेन्द्र दुईलाइनमा मिल्नै नसक्नेगरी विभक्त भएको छ । यता बहुमतले जनयुद्धको लाइन मुताविक सङ्घर्षलाई ठोस गर्ने तयारी र दस्ताहरू निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । रोल्पा, रुकुमतिर काङ्ग्रेसी प्रशासन र गुण्डाहरूसँग झडप सुरु भइहाल्यो । उनीहरूले दमनलाई वेलगाम कुँदाउन थाले । मैले प्रश्न गरेपछि उहाँले कोठामा लानुभयो र मासुसहित खाना खुवाउँदै दुइलाईन सङ्घर्षको अनिवार्यता, वाध्यता र अवसरवादीहरूले पारेको हैरानीबारे सरल र व्यापक व्याख्या गर्नुभयो । साथै, पार्टी केन्द्रले छिट्टै निर्णायक फैसला गर्नेतर्फ सोचिरहेको बताउनुभयो । यसपटक पनि सन्तुष्ट भएरै फर्किएँ उहाँसँग ।
“लेट जाओ, खडा होजाओ, कक करो, फायर करो” हिन्दी भाषामा त्यसो भन्दै तीनतले घरको बिचतलामा तीनजना मान्छे लम्पसार पर्न गा¥हो कोठामा एकजना लाहुरे काकाले हामीलाई थ्री नट थ्रीको तालिम दिनुभयो । बमको तालिम भने अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले दिनुभयो । हामी त्यस्तै ७ जना थियौँ । उता कृष्ण सेन दाइहरू राजनीतिक प्रशिक्षणमा जुटिरहनुभएको थियो । यसैबीच भेट भयो हाम्रो । हामी ट्रेनिङ्गपछि चमचमाएका जस्ता भएका थियौँ । संसारै जित्न हिंडे जस्तो लाग्न थाल्यो । अद्भूत गति पैदा भयो भने पनि हुन्छ । यो पटक दुवैबीच नयाँ युद्ध थालनीबारे गहन छलफल भयो । मैले उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा तपाईं जान मान्नुभएनछ किन भनेर सोधेँ । साथै, तपाईंजस्ता कमरेड जाँदा जनयुद्धलाई फाइदा पुग्ने कुरा राखेँ । उहाँ उभिएर प्रस्ट्याउनुभयो र आफू साहित्य–सिर्जनाबाटै अगाडि बढ्ने सोचमा रहेको र युद्धमा नयाँ साथीहरू जानुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
२०५५ सालमा चौथो विस्तारित बैठकबाट म केन्द्रीय समितिमा छानिएँ । जनयुद्धको तेस्रो वर्ष थियो यो । उहाँ जेलबाट छुटेपछि खुसी हुनुभयो र मलाई बधाई दिनुभयो । मलाई केही सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँको बधाईमा मैले जिम्मेवारीबोध गरेको महसुुस गरेँ ।
अन्तिम गिरफ्तारी र अद्वितीय सहादत
“माओवादीका सदस्य कृष्ण सेन काठमाडौंमा गिरफ्तार” बीबीसीले २०५९ सालको एक राति प्रचार ग¥यो । सबै कमरेडहरू अस्वाभाविक ढङ्गले झस्किनुभयो । हाम्रा रेडियोका आवाज ह्वात्त बढे । कमरेडहरूले मतिर हेर्दै– लौ समात्यो सर कृष्ण सेनलाई भने । यो प्रचारले फेरि आकुल–व्याकुल बनायो । हो भन्ने नै लाग्यो । १/२ दिनपछि पार्टीले वक्तव्यमार्फत समातेको पुष्टि पनि ग¥यो । हाम्रोबीचमा अनेकौँ अड्कलबाजी चले, कसैले भने “मार्न सक्छ ।” कसैले भने सेन जस्तो स्थापित व्यक्तित्वलाई मारे आफैँ फस्छ, त्यसैले नमार्ला । जेल हाल्छ कि आदि आदि तर मलाई मार्न पनि सक्छ निर्लज्ज सत्ताले भन्ने लाग्यो किनकि हाम्रो पार्टीले आधारइलाका निर्माणको कार्यदिशा पारित गरेको थियो । स्थानीय सत्ताहरू बन्दै थिए । पहिलो बाटो भङ्ग भएको थियो र अमेरिकाले शेरेलाई उचालिरहेको थियो । दाङ र अछाममा शाहीसेनाको सम्पूर्ण पराजय भएको थियो आदि आदि । नभन्दै त बीबीसीले फेरि प्रचार ग¥यो कि सेनको हिरासतमा मृत्यु भयो । अर्कोदिन सेन दाइकी श्रीमती तक्मा केसी कमरेड रेडियोमा गम्भीर भएर लास पनि नदिएको पीडा पोख्नुभयो । हामी त साँच्चै नै भावुक भयौँ । वास्तवमा युद्धले कठोर बन्न मात्र होइन, भावुकता पनि त्यत्तिकै बढाएको छ । दिनदिनै कमरेडहरूको सहादतको खबरले भित्रसम्म घोचिरहन्थ्यो । यो सहादतले त कहिल्यै नपुरिने घाउ लागेको अनुभूति भयो मलाई । हामी सबैले प्रण ग¥यौँ कि हत्या र मृत्युले सहिदहरूको होइन, सामन्ती सत्ताको अन्त्य भइरहेको छ ।
सेन दाइको साहित्यिक व्यक्तित्व र हाम्रो अपेक्षा
चर्चा, परिचय र बुझाइ नेताको भूमिकाबाट हुनुभयो सेन दाइ । हामीले उहाँबाट पछि पनि नेताकै अपेक्षा ग¥यौँ र मैले त पटक–पटक आग्रह गरेँ पनि तर पछिसम्म आइपुग्दा पनि नेताको लागि तयार हुनुभएन । उहाँ साहित्यतर्फ नफर्किनेगरी प्रवेश गरिसक्नुभएको रहेछ । दोस्रो भेटमा यो खोल्नुभएको थियो ।
नेता मान्दा नै अर्थात् उहाँ जेल हुँदा नै कसैले मेरो हातमा किताब दियो । राप्ती, सन्देश र प्रभुत त्यहाँ सेन कमरेडका कविता पाएँ । लाहुरेको बारेमा मैले दोहो¥याइ–तेहे¥याइ पढेँ । निकै मन प¥यो कविता । काठमाडौं गएपछि त उहाँका धेरै कविता पढियो र शोकाञ्जली, इतिहासको यो घडीमा र बन्दी र चन्द्रागिरि त चर्चितै छन् । कविहरूको चर्चा हुँदा धेरै पहिले नै उहाँको बारेमा कुरा भयो । महेश्वरलाई पनि उहाँको कविता मन पर्दो रहेछ । छलफलमै कृष्णध्वज र हितमानले भनेको सुनेको थिएँ । सेनजी कवि हुने स्वभावकै मान्छे हो । बडो भावुक एउटा कुरामा पस्यो भने समय गएको पत्तै पाउनुहुन्न ।
मैले धेरैको मुखबाट सुनेको छु– सेनजीको कविता पढेपछि अरूको त पढेकै जस्तो हुँदैन । सत्य कुरा हो सेन कमरेडका कविता निकै फरक पाउँछु म पनि । उहाँका कविता सलल बगेको कञ्चन नदी जस्तो लाग्दछ । सरल शब्दहरूको सुन्दर सिलाइ । कुनै अड्काउ र दुविधा देखिंदैन । विचार, भावना र रागको बेजोड मिलान । कवितामा प्रतिवद्धता, दृढता र निष्ठा उहाँकै जीवन जस्तो सलक्क उभिएका हुन्छन् । सिर्पm एक दुई टुक्रा उल्लेख गरूँ :
मेरा भुलचुकहरूलाई तिमीले क्षमा गरे
जग्मगाउने उज्यालो प्रकाशजस्तै
नयाँ जीवनको अङ्कुर फुट्नेछ ।
सबै रहौँला नरहौँला
र सायद यो खुसीको हर्षित क्षण
हाम्रो सुखद मिलनको अन्तिम क्षण पनि हुन सक्छ
र म पनि रहिनँ भने
लेख्दालेख्दै भोलि अपूर्ण हुन सक्छ
तर गेष्टापोको ग्याँसच्याम्बर जस्तो
गद्दारी होइन, मृत्यु रोजेका छन्
वास्तवमा ती सच्चा जीवन बाँचेका छन् ।
(बन्दी र चन्द्रागिरिबाट)
भनिन्छ, साहित्य पनि राजनीतिकै एउटा पाटो हो र राजनीति पनि साहित्यकै एउटा पाटो हो । राजनीतिमा साहित्य भएन भने भुत्ते हुन्छ, खोक्रो हुन्छ र रुखो हुन्छ । साहित्यले राजनीतिलाई रापिलो, धारिलो र चम्किलो बनाउँदछ । त्यस अर्थमा साहित्यकार अनन्त कुनै न कुनै विचारको राजनीतिज्ञ पनि हुन्छ । सेन दाइ वास्तवमा साहित्यकार भए पनि जनताको राजनीतिज्ञ र नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँको जेलैजेलको जीवन, गिरफ्तारीबीचबाट बलिदान स्वयम्ले यो बोध गराउँदछ ।
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को प्रभाव, प्रेरणा र आदर्शमा उभिएर स्मरण गर्दा मलाई दुईचार कुरा दावीका साथ भन्न मन लाग्छ । पहिलो हो, जुनसुकै विचार र विज्ञान पनि आफ्ना उत्तम प्रतिनिधिमार्फत नै नयाँ पुस्तामा प्रवेश गर्दछ । त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको अभावमा समाजले वैज्ञानिक विचारको श्रेष्ठताबाट वञ्चित हुनुपर्दछ । सेन त्यस्तै एउटा उत्तम प्रतिनिधि सावित हुनुभएको छ । दोस्रो, वैज्ञानिक विचारबाट हुर्केको इच्छाशक्ति तानाशाह र हत्याराहरूको गोली र बारुदभन्दा पनि सयौँगुणा बलियो हुन्छ । विचारमा उभिएको निष्ठा र आदर्श मृत्युभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ । तेस्रो कुरा, आफ्नो मूल्यको निम्ति गरिने बलिदान मान्छेको खोक्रो जीवनभन्दा अजर–अमर हुन्छ र सत्ताबाट जन्मिने ढोङ्गी, अहङ्कारलाई चुरचुर पार्न योग्य हुन्छ । त्यसले नै नयाँ पुस्तालाई युग–युगसम्म निर्देशित गरिरहन्छ । कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ त्यसैको एउटा पर्यावाची नाम हो ।
१७ असार, २०६४
शिक्षा विकास केन्द्रका इन्जिनियरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै विवादमा